Diiwaanka Nafaqada • Bogga 2 ee 3 • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cunto
CBD waxay ka faa'iideyaan!
cannabis, CBD, Caafimaadka, Wararka, Nafaqeyn
CBD meel walba waa ay joogtaa maalmahan. Tani maahan wax la yaab leh maxaa yeelay cannabidiol ayaa gebi ahaanba sharci ka ah meelo badan. Waxaa loo iibiyaa sidii ...
CBD, Caafimaadka, Wargeysyada caalamiga ah ee cannabis
Ka dib sharciyeynta federaalka ee hemp ku saleysan CBD ee Mareykanka bishii Diseembar, soosaarayaasha ...
Maalinta Cunnogeelan ee Adduunka: Sideed u isticmaashaa cannabis adiga oo aan sigaar cabin?
May 31, 2019 - Maalinta Sigaar Cabista Adduunka - Isticmaalka xashiishka waxaa loo samayn karaa siyaabo kala duwan, oo ay ku jiraan sigaar cabbidda iyo neefta ...
Saliida CBD ee miisaan lumis: miyuu CBD kaa caawin karaa inaad lumiso miisaanka?
CBD, Caafimaadka, Nafaqeyn
Miyaad joojisaa cuntada oo aad u beddeshaa CBD miisaan lumis? Muddo sanado ah waxaa jiray fikrad khaldan ...
Shirkadda Spherex - oo caan ku ah wax soo saarka vape - waxay biloowdaa biyo xashiishad ah oo magaceeda la yiraahdo Phyx oo ku taal Colorado. Milkiilaha iyo aasaasaha Niccolo ...
cannabis, CBD, Nafaqeyn
Horumarro badan oo cusub ayaa ka socda dhinaca cabitaannada isku dhafan. Qalabyada farshaxan ee soo saara iskudhafyada gaarka ah, iskudhafka iyo curinta waa are
Haweenka iyo waayeelka ayaa ku biiraya dhaqdhaqaaqa xashiishka, kaas oo bixiya fursado maalgashi oo cusub, sida ay sheegeen guddi ka kooban maal-gashadayaasha xashiishadda oo la wareystay intii lagu jiray ...
Wax soosaarka saliida ee CBD - waa wax soo socda mise mustaqbalka cuntada?
Saliida CBD waxaa laga soo qaatay xashiishka iyo dhirta geesaha waana si kadis ah kuugu hareeraysan. Laga soo bilaabo kafeega ilaa yogurt barafaysan ilaa ...
cannabis, CBD, Caafimaadka, Nafaqeyn
Cabitaanada xashiishku mar horeba waa ganacsi weyn oo si dhakhso leh ayey u korayaan. Markay dadku ka fikiraan xashiishadda, waxa ugu horreeya ee maskaxdooda ku soo dhaca waa ...
Shirkada Schliidt ee dabiiciga ah ee Unilever ayaa soo saari doonta alaabada hemp iyo alaabada udgoon ee CBD
Saamiyada & Dhaqaalaha, CBD, Caafimaadka, Wargeysyada caalamiga ah ee cannabis
Unilever ayaa indha indheynaysa xashiishadda iyada oo mid ka mid ah laamaheeda ay soo saareyso badeecad ay soo saartay CBD Talaadada - waa maxay ...
Cunto sarre: Takhtar sare iyo Joseph oo kiknoolaji ku karsado Videoka
cannabis, CBD, Daroogooyinka, Caafimaadka, Microdosing, Psychedelics, Nafaqeyn
Karinta xashiishku waa sinta. Tusaale ahaan, kuugga TV-ga Gottlieb wuxuu ku tusayaa lix qaybood oo ah 'Bakhtigaaga' waa cuntooyinka ugu macaan ee ...
In kasta oo marijuana aysan xallin karin dhammaan dhibaatooyinka nolosha, waxay kaa caawin kartaa inaad u ekaato sida ugu fiican ...